बीपीका चिकित्सक आन्दोलित, संस्था सुधार गर्न अल्टिमेटम « Naya Page
धरान, २५ माघ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखडा बनेपछि त्यसविरुद्ध यहाँका चिकित्सक आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले संस्थालाई तत्काल सुधार नगरे सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिँदै व्यवस्थापन पक्ष समक्ष दबाब बढाएका छन् ।
चिकित्सकले शुक्रबारदेखि उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको कार्यकक्षअगाडि धर्ना दिन थालेका छन् । उनीहरूले शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी आफ्ना माग पूरा गर्न आइतबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले प्रतिष्ठान सुधार गर्न पदाकिारी सक्षम नदेखिएको बताए । मेयर राईले प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा ‘खराब व्यक्तिहरू’ लाई राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले प्रतिष्ठानको अवस्था कमजोर बनेको उनको तर्क छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट